फेरी कञ्चनलाई सहयोग लिएर हस्पिटल पुग्दा आमा भयो बिहोस, भेन्टीलेटरमा झनै चिन्ताजनक अवस्था हेर्नुस् (भिडियो सहित ) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/फेरी कञ्चनलाई सहयोग लिएर हस्पिटल पुग्दा आमा भयो बिहोस, भेन्टीलेटरमा झनै चिन्ताजनक अवस्था हेर्नुस् (भिडियो सहित )
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ यो पनि पढ्नुहोला स्वास्थ्य रोगहरूको अनुपस्थितिको नाम मात्र होइन । हाम्रो सम्पूर्ण स्वास्थ्यको बारेमा ज्ञान हुनु हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ।स्वास्थ्यको अर्थ फरक व्यक्तिको लागि फरक हुन्छ। तर यदि हामी एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण अनुसार कुरा गर्ने हो भने आफूलाई स्वस्थ मान्नु भनेको हामी हाम्रो जीवनमा आउनेवाला सबै सामाजिक, शारीरिक र भावनात्मक चु’नौतिहरु सफलतापूर्वक प्रबन्ध गर्नु हो।आजको समयमा, स्वस्थ राख्नको लागि धेरै आधुनिक प्रविधिहरू उपस्थित छन्, तर यी सबै प्रभावकारी छैनन्।
शरीरलाई स्वस्थ र सफा राख्न दिनहुँ नुहाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नुहाउनु महत्त्वपूर्ण छ,तर नुहाउने क्रममा तपाईंले घो’टी घो’टी शरीरका अं’गहरुमा साबुन लगाउनु पनि हा’निकारक हुन सक्छ। हामीलाई साबुनले कसरी क्ष’ति पुर्‍याउन सक्छ भनेर छक्क पर्दछौं, तर यो सत्य हो कि साबुन हाम्रो शरीरको अं’गमा लगाउँदा हामीलाई हा’नी गर्छौं।थाहा पाउनुहोस् कुन कुन अं’गमा लगाउनु हुदैन त साबुन ?
सुन्दर अनुहार हरेक कोही चाहान्छन् । तर जब अनुहारको ख्याल राख्ने कुरा आउँछ । तब मानिसहरु पछि हट्ने गर्दछन्।अनुहारको छाला शरीरको बाँकी छाला भन्दा धेरै कोमल हुन्छ। साबुन कहिल्यै अनुहार मा लगाउनुहुँदैन। यदि सम्भव छ भने, फेस वाश प्रयोग गर्नुहोस्।
कपाललाई धुने समयमा स्यापुको प्रयोग गर्नुहोस् ना कि साबुनको । कपाल एकदमै मुलायम हुन्छन् जुन साबुन मिलेको केमिकलले तपाईको कपाललाई खराब गराउँछ र तपाईको कपाल झर्ने समस्या पनि देखिन सक्छ ।यति मात्रै होइन कतिपय मानिसको त कपाल सुख्खा हुने समस्या पनि उत्पन्न हुन थाल्छ । जहिले तपाई नुहाँउनुहुन्छ तब यो कुराको ध्यान राख्नुहोस् कि कपालमा साबुन लगाउदै नलगाउनुहोस् ।
सामान्यतया युवक जब नुहाउँछन् तब खुब साबुन लगाउने गर्दछन् ।मानिसहरु हरेक अं’गमा साबुन घो’टी घो’टी लगाउने गर्दछन् । यस्ता मानिस पक्कै पनि आफ्नो अ’न्डरआ’म्र्समा पनि साबुन घो’टी घो’टी लगाउने गर्दछन् ।सबैलाई थाहा नै छ शरीरको यो हिस्सा मुलायम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा साबुनमा मिलेको के’मिकलले तपाईको शरीरलाई नो’क्सान पुर्याउँछ ।
शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री डा. शशांक कोइराला चुनावमा भाग लिने, “हिन्दूराष्ट्र” पूनस्र्थापनाको सहमति
कालिन्चोक् भगवतिको दर्शन गर्नुहोस। भोलिको राशिफल हेर्नुहोस। साउन ०७ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
आफ्नै छोराका कारण ज्या’न ब’चाउन मुस्किल भयो भन्दै धरीधरी रुँदै आमा मिडियामा(भिडियो हेर्नुहोस्)